Thazin speaks… - All Things Myanmar Burmese
Previous: « May Sweet is back in Yangon
Next: Couples’ Sleeping Styles »
Myanmar Blog » Asia Entertainment » Thazin speaks…
A sincere request from us
Over the past few months, shweDarling.com Blog has been receivingalotshwedarling.com/blog
Behind the scence pictures of “Once uponatime” video, starring Phweshwedarling.com/blog
Credit to : Kilo November
Thazin speaks of her love life in her recent interview. She told the interviewer that she might not ever find her soulmate in this life. She is planning to visit Japan in May 2010. (1 votes, average: 3.00 out of 5)
Phyu Phyu Kyaw Thein speaks…
Soe Pyae Thazin to sing
6 Responses to “Thazin speaks…” စသ်သူ @ November 22nd, 2009 at 5:56 pm:
sailovest @ November 25th, 2009 at 1:17 am:
နောက်ကွယ်မှာတော့ …. မင်းကိုသတိယမှု… လွမ်းဆွတ်မှုတွေကို…. အွန်လှိုင်းပေါ်လွင့်တင်လို့ … မင်းကိုမျှော်နေဆဲပါ ….
မျိုးမြင့်သူ @ February 5th, 2010 at 1:47 am:
nandakyaw20 @ March 17th, 2010 at 3:39 pm:
July 19 @ July 19th, 2011 at 11:59 am:
July 19 @ July 19th, 2011 at 12:02 pm:
အမည် – ကျော်ဆန်းလင်း
မွေးနေ့ – ၂၉.၅.၁၉၈၄
လိပ်စာ – အမှတ်(၅၀၈)၊ ကျွန်းလုံးဥသျှောင်၊
အထက်ပါ ကျော်ဆန်းလင်းသည် ၊ ရန်ကုန်မြို့၊ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်နေ၊ မိန်းမလျာတစ်ဦးအား ၄င်းမိသားစုမှာ အဆင်မ ပြေသဖြင့် ၄င်းမှရှာဖွေကျွေးမွေးလိုကြောင်း ၄င်းအား နိုင်ငံခြားသို့အလုပ်လုပ်ရန် ပို့ပေးပါဟု မိန်းမလျာအားအကူအညီတောင်းခံခဲ့ပါသည်။ ၄င်းကျော်ဆန်းလင်း သည် မိန်းမလျာအား နိုင်ငံခြားတွင်သွားရောက်အလုပ်လုပ်ရလျှင် စိုက်ထုတ်ပေး မည့်ငွေကြေးအားလုံး ပြန်ဆပ်ပါမည်ဟု ပြောဆိုပြီး ၄င်းအား ယုံကြည်မှုရှိရန် စာချုပ်စာတမ်းနှင့်တကွ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပါသည်။ ၄င်းကျော်ဆန်းလင်းသည် မိန်းမလျာအိမ်တွင် (၂)နှစ်ခန့်နေထိုင်ခဲ့ပြီး နေထိုင်စဉ်(၂)အတွင်း မိန်းမလျာ အကူအညီဖြင့် သင်တန်းများတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ (11.12.2010)နေ့တွင် မိန်းမလျာ၏ ငွေကြေးအထောက်အပံ့ဖြင့် ဒူဘိုင်းနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ ပါသည်။
အဆိုပါ ကျော်ဆန်းလင်း ဆိုသူသည် ဒူဘိုင်းနိုင်ငံတွင် ယခုအချိန်ထိ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော်လည်း မိန်းမလျာအားပေးရန်ရှိသော ငွေကြေးများကို အပြည့်အ၀ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်း မရှိသည့်အပြင် ၄င်းကျော်ဆန်းလင်းအား မိန်မလျာမှ အဆက်အသွယ်လုပ်ရာတွင် ရှောင်တိမ်းနေခဲ့ပါသည်။ ၄င်းမိန်းမလျာ မှ မန္တလေး၊ မဟာမြတ်မုနိဘုရားတွင် ဈေးရောင်းနေသော အစ်မနှင့် အဒေါ်၊ မော်လမြိုင်ရှိ အမေတို့အား လှမ်းအကြောင်းကြားသော်လည်း ၄င်း ကျော်ဆန်းလင်း ၏ အမေ၊ အစ်မနှင့် အဒေါ်ဖြစ်သူတို့ မှာ သူတို့မသက်ဆိုင် ကြောင်း ၄င်းတို့မှ တာဝန်မယူကြောင်းပြောဆိုပြီး ခေါင်းရှောင်နေခဲ့ပါသည်။
ကျော်ဆန်းလင်း ၏ မှတ်ပုံတင်မူရင်းနှင့် စာချုပ်စာတမ်းတို့မှာ မိန်းမလျာ၏ လက်ဝယ်တွင် ယခုအချိန်အထိရှိနေပြီး၊ မိန်းမလျာမှ မကျေနပ်သဖြင့် တရားရုံး တွင် ကျော်ဆန်းလင်းအား တရားစွဲဆိုရန် ပြင်ဆင်နေကြောင်းသိရှိရပါသည်။